तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको विकास निर्माणमा अनुकूल आधार तयार भएको छः मुख्यमन्त्री पोखरेल - नेपालबहस
बिहिबार , फागुण २०, २०७७
तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको विकास निर्माणमा अनुकूल आधार तयार भएको छः मुख्यमन्त्री पोखरेल
| १५:०१:५१ मा प्रकाशित
२ फागुन,लुम्बिनी । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नयाँ राज्य पुनःसंरचना अन्तर्गत बनेका प्रदेश र यसका संरचना विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन् । प्रदेशका संरचना स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने काम गरेको छ ।
यससँगै प्रदेश सरकारले जनतालाई विकाससँग जोड्ने गरी विकासका सानाठूला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थापना दिवसको मूल समारोह आयोजना गर्दैछ । यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि भरत केसी र नीरा गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको अंश :
राससः मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि बनेका प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस तीन वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका रह्यो र ?
मुख्यमन्त्रीः हामी यस वर्ष नयाँ रणनीतिक कार्ययोजनातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । पहिलो कुरा, हामी एउटा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने हिसाबले तयारीको काममा जुटेका छौँ जसले पछि आउनेका लागि पनि प्रदेशको विकासलगायत काममा अन्योल अन्त्य गर्ने छ । दोस्रो, लुम्बिनी प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको सोच अगाडि सारेका छौँ । यद्यपि कोभिड– १९ को असर नपरेको भए पहिले नै गर्ने थियौँ । यस वर्ष ती काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छौँ ।
राससः सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामी सफल छौं भन्ने हो भने तथ्यमा हामी सात प्रदेशमा कुन स्थानमा छौँ, सफलताका सूचक के के हुन् सक्लान् र ?
मुख्यमन्त्री : लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्दा हामी लगभग सम्पन्नताको अवस्थामा पुगेका छौँ, अरु धेरै ठाउँ मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणकै प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सन्दर्भमा कुरा गर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । अब बाँध निर्माण सकेर सुरुङबाट पानी झार्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
तिलौराकोटमै एउटा नयाँ सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने हिसाबले मास्टर प्लान तयारीको काम अगाडि बढेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनीकै विकासका सन्दर्भमा पहिलेका तुलनमा धेरै नयाँ कुरा अगाडि बढ्न थालेका छन् । अर्कातिर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र प्रसूति अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । अब स्थानीय समुदायसँग लुम्बिनीलाई जोड्न सकिएन भन्ने गुनासो अन्त्य हुँदैछ । प्रदेश सरकारकै अग्रसरमा चक्रपथको काम पनि यस वर्ष पूरा हुदैंछ भने भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
राससः यस तीन वर्षका अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र कति किलोमिटर बाटो निर्माण भए होला र ?
मुख्यमन्त्रीः प्रदेश सरकारका तर्फबाट लगभग दुई आर्थिक वर्षभित्रमा करीब ४०० किलोमिटरसडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यहीरुपमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काम अघि बढेको छ ।
राससः लुम्बिनी प्रदेशलाई विकासका दृष्टिकोणले अन्य प्रदेशभन्दा के कारणले फरक मान्न सकिन्छ र ?
मुख्यमन्त्रीः हामी आर्थिक –सामाजिक हिसाबले औसतमै छौँ । पछाडि परेको ठाउँलाई अगाडि बढाउनका लागि समय लाग्छ तर हामी जे काम गर्दैछौँ, कामका परिणाम स्वाभाविकरुपमा सकारात्मक छन् । पूँजीगत खर्चको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने कुरा मुख्य हो, निजी क्षेत्र हामीकहाँ उत्साहित नै देखिन्छ । लगानीका दृष्टिकोणले तुलनात्मक हिसाबले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ ।
रासस : लुम्बिनी प्रदेशमा अब कति कानून आवश्यक छ, कानून कार्यान्वयनको पाटो अलि कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ नि र ?
मुख्यमन्त्रीः अहिले मूल कानूनका हिसाबले भन्दा पाँच दर्जन जति मूल कानून निर्माण भएका छन्, त्यसका सहायक कानूनहरु पनि थुप्रै बनेका छन् । सबै विषय एकचोटि कार्यान्वयनमा जाँदैन, आवश्यक पर्दा प्रयोग हुने हो । कानून बनाउनुपर्छ, आवश्यक परेका बेला कानून प्रयोग हुन्छ तर सामान्यतया सरकारी खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानून नभइकन काम चल्दैन ।
राससः लुम्बिनी प्रदेशको महत्वाकाङ्क्षी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट कति जति मान्छे लाभान्वित भएका होलान्, के प्रभाव परेको होला र ?
मुख्यमन्त्रीः हाम्रो सरकारी खर्च व्यवस्थापन प्रक्रियाका जटिलताले मान्छेलाई तत्काल राहत दिन नसकेका विषयमा यसले सम्बोधन गरेको छ । अलिकति कार्यविधि लक्षित समुदायमा जाने प्रकारको बनाएका छौं, जसरी सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायमा नपुगेर टाठाबाठाले पाए भन्ने आरोप आउँछ, त्यसको कार्यविधि सोझै लक्षित समुदायमा पुग्ने हिसाबले बनेका छन् । त्यसका असर धेरै सकारात्मक छन् ।
पहिला हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा गरेका थिएनौँ, यस वर्ष नगरपालिका क्षेत्रमा पनि गर्दैछौं । यस वर्ष कार्यक्रमको प्रभाव अझै अनुभूति गर्न पाएका छैनौं, शहरी क्षेत्रमा आयो भने अझै बढी मान्छेले प्रत्यक्ष अनुभव गर्छन् जस्तो लाग्छ ।
राससः जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकिएपछि पनि प्रदेशस्तरमा त्यति प्रभावकारी नभएको हो ?
मुख्यमन्त्री : त्यसो होइन, बरु लक्षित समुदाय केन्द्रित भएर ठोस ढङ्गले काम भएका छन् । सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भने पहिलेको तुलनामा तीव्र भएको छ । कोहलपुरमा चिडिमारको एकीकृत बस्ती निर्माण गरेका छौँ । एउटा सिङ्गो बस्तीलाई जनता आवाससँग जोडेर ल्याएका छौँ ।
राससः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम सबैतिर शुरु भइसकेको छ, यस प्रदेशमा आयोगको काम के कस्तो अवस्थामा छ ?
मुख्यमन्त्री : पहिलो कुरा शुरुको चरणमा रुपन्देहीको कञ्चन र दाङको बबई गाउँपालिकालाई नमूनाका रुपमा अगाडि बढाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं, प्रदेशका दुई वटा पालिकालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेका थियौँ, यी दुई पालिकाको नापनक्शाको तहमा पुगिसकेको छ । तिनीहरु एक प्रकारले नक्शाङ्कन तहमा प्रवेश गरेका छन् ।
राससः अहिले यदाकता सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने काम भएको छ । यसलाई कुनरुपमा लिन सकिन्छ र ?
मुख्यमन्त्री : सङ्घीयतामाथिको प्रश्न संविधान निर्माणकै बेलादेखि थियो । त्यतिबेला पनि सङ्घीयता पक्ष र विपक्ष नभएको होइन र अहिले पनि त्यो विचारमाथि बहस चलिरहेको छ । नयाँ प्रणालीतर्फ जान चाहिँ नेपालको संविधानमा दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यस प्रकारको कुरा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ । कसैले प्रकट गर्ने विचारले मात्र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुदैन् । व्यक्तिले प्रकट गरेका विचारले मात्र सङ्घीयता धरापमा छ भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन किनकि हाम्रो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गरिसकेको छ ।
राससः नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो पटक सत्तापक्ष तपाईंकै दलको विवादका कारण असहजता देखिएको छ । यसैका कारण केही प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन् । यस प्रदेशमा पार्टीको विवादका कारण सरकारको अवस्था के हो ?
मुख्यमन्त्रीः राजनीतिकरुपमा मतभेद अनि यहाँ पनि देखा परेको छ । विभिन्न ठाउँमा सभा, जुलूस भइराखेकै छन् तर कसैले सङ्गठितरुपमा प्रदेशसभाभित्र प्रदेश सरकारको काममा अहिलेसम्म प्रकट गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारको काममा कसैले माथि जे भने पनि हाम्रो ठाउँमा असर परेको छैन भन्ने कुरा चित्रण गरेको छ । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग स्थानीय सरकारको सहकार्य हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ । यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । हिजो जसरी सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रकारको समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरियो, त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ ।
राससः पार्टी विवादले यहाँको सरकारका मन्त्री पक्षविपक्षमा देखिएका छन्, यसले सरकारलाई काम गर्न असहज भएको छैन र ?
मुख्यमन्त्रीः अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभूति भएको छैन । यद्यपि दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दा परिणाम के आउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । मोटामोटीरुपमा अब विभिन्न जिल्लाको रिपोर्ट दिने क्रममा अघिल्लो वर्षको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको खर्च सङ्घ र स्थानीय तहको भन्दा राम्रो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको खर्च सङ्घका भन्दा कम देखिन्थ्यो तर यस वर्ष चाहिँ सङ्घको तुलनामा प्रदेशको खर्च बढी भइरहेको छ । पार्टीभित्र विवाद पछाडिको परिमाण विश्लेषण गर्न अलि समय लाग्ला तर त्यस्तो नकारात्मक असर परेको छैन ।
राससः प्रदेशको बडो महत्वपूर्ण काम स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लागेको छ । यसै सन्दर्भमा पहिलो पटक प्रदेश स्थापना दिवस स्थायी राजधानीमा हुँदैछ । त्यहाँ स्थायी संरचना कहिले बन्लान् ? प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन स्थायी राजधानीबाट कहिलेदेखि शुरु होला ?
मुख्यमन्त्रीः हामी कति छिटो काम गर्न सक्छौँ, त्यही आधारमा हुन्छ । अहिले हामीले स्थापना दिवस स्थायी राजधानीमा गर्नुका कारण अब कस्तो संरचना त्यहाँ बनाउने भन्ने बहसका लागि पनि हो । यस अर्थमा त्यहाँ हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ । अर्कातर्फ हामीले पूर्वाधार विकास स्थापना कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसको डिटेल मास्टर प्लान तयार गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौँ ।
त्यसले गर्दा त्यहाँ नेपालकै एउटा सुन्दर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सकिन्छ । जुन ठाउँमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो ठाउँ एक हिसाबले भन्दा नेपालका राम्रा ठाउँमध्येमा पर्छ । एउटा भौगोलिक हिसाबले, शहरी सभ्यताको निर्माणका हिसाबले, लुम्बिनी प्रदेशका हिसाबले भन्नुपर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो एकल नदी|(राप्ती)नै त्यहीँ हो । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो सम्भावना छ ।
तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन : मुख्यमन्त्री राई ५ दिन पहिले
हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्छौ : मुख्यमन्त्री पौडेल ६ दिन पहिले
ओलीको तमासामा प्रदेश सरकार १ हप्ता पहिले
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्दै, कांग्रेस महामन्त्री डा. कोइरालाले गरे शिलान्यास २ हप्ता पहिले
समृद्धिको अभियानलाई गण्डकी प्रदेशले साकार पार्दै छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ २ हप्ता पहिले
जनमानसमा भविष्यप्रति आशाको भाव सिर्जना गरेका छौ : मुख्यमन्त्री राई २ हप्ता पहिले
कोभिड–१९ विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप २० दिन सञ्चालन हुने ३ घण्टा पहिले
बिहिबार देशभरका सबै अदालत बन्द हुने ४ घण्टा पहिले
ओलीलाई गल्ती सुधारी प्राज्ञिक मर्याताको पालना गर्न पूर्वउपकुलपतिहरूकाे आग्रह ४ घण्टा पहिले
आयोगलाई ५ पूर्वप्रमुख आयुक्त भन्छन्, : नेकपाबारे यथाशीघ्र निर्णय देऊ ! ४ घण्टा पहिले
एलपिएल : हिमालयन ह्याइट हाउसको जीत ५ घण्टा पहिले
लक्ष्यभन्दा रु ४४ करोड बढी राजस्व सङ्कलन ५ घण्टा पहिले
सर्लाहीमा दुई स्थानमा एकैदिन बिओपी स्थापना, छ स्थानमा बाँकी ५ घण्टा पहिले
माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर किशोरको मृत्यु ५ घण्टा पहिले
भागरथी हत्या प्रकरणः आरोपितको चौथोपटक म्याद थपियाे ६ घण्टा पहिले
सरकार र विप्लव नेकपाबीच एकैदिन दुई चरणको वार्ता ! ६ घण्टा पहिले
१० दिन देखि खुल्ला आकाशमुनी वादी समुदायको धर्ना ६ घण्टा पहिले
दोभान आगलागी पीडितलाई सरकारको पाँच लाख ७ घण्टा पहिले
पत्रकारले कोभीड खोपबारे गलत हल्ला फैलाए : डा. सबिता ७ घण्टा पहिले
दुई भिन्नाभिन्नै दुर्घटनामा परी दुईको मृत्यु ७ घण्टा पहिले
भूगोल साहित्य समाजको नयाँ कार्यसमिति ११ घण्टा पहिले
सिभिल लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका १६ घण्टा पहिले
ज्येष्ठ नागरिकसँग महासंघको स्थापना दिवस ११ घण्टा पहिले
२० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न स्वाबलम्बनले बोलायो साधारण सभा १६ घण्टा पहिले
रोनाल्डोले गोल गरेपछि युभेन्टसले शानदार जित १६ घण्टा पहिले
फेवातालको क्षेत्रफल दुई हजार ५०० रोपनी वृद्धि ९ घण्टा पहिले
बाँझो जग्गामा कागती खेती गर्दै युवा १० घण्टा पहिले
टुकीको भरमा जीवनयापन गर्दै आएकाे पाचोकमा पुग्यो बिजुली ६ दिन पहिले
नवलपरासीमा दुईवटा ट्रक ठोक्किदा दुवै चालकको मृत्यु २ दिन पहिले
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदार र मजदूरबीच तनाब ३ दिन पहिले
किसान लक्षीत जीओ कृषि एप सञ्चालनमा २ दिन पहिले
नेकपाको कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बनेको छैन : कोइराला ४ दिन पहिले
नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम तीव्र रुपमा ६ दिन पहिले
प्रभु क्यापिटलले दियो शेयरबजार सम्बन्धी १ दिने आधारभूत तालिम २ हप्ता पहिले
आज माधवनारायणका वर्तालुलाई खुवाइयो खीर १ हप्ता पहिले
युएनएफपीएद्धारा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग ८ घण्टा पहिले
नेपालमा नै मल कारखाना स्थापनाका लागि छलफल हुँदैछ : मन्त्री अर्याल २ हप्ता पहिले
भूमि आयोगले भूमिहीनको लगत सङ्कलन गर्दै ४ हप्ता पहिले
राष्ट्रपतिले क्षमायाचना पशुपतिमा होइन जनतासँग गर्नुपर्छ : पम्फा भुसाल ७ दिन पहिले
कोरोना कहर घटेपछि खप्तडमा पर्यटकको चहलपहल १ हप्ता पहिले
बन्द हुने स्थितिमा पुगेको विद्यालय गाउँलेले ब्युँताए ३ हप्ता पहिले
अध्यादेश फिर्ताको माग गर्दै नेविसंघको प्रर्दशन १० महिना पहिले
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्याे ८ महिना पहिले
कपिलवस्तुमा प्रहरीको विशेष अप्ररेशन, स्कुलले बालबालिका त्रसित ! २ वर्ष पहिले
कांग्रेसको अधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन १ वर्ष पहिले